Sokafy ny Sofinao Handre ny Feon’Izao Tontolo Izao Miaraka amin’ny GV Radio · Global Voices teny Malagasy
Sokafy ny Sofinao Handre ny Feon'Izao Tontolo Izao Miaraka amin'ny GV Radio
Voadika ny 12 Mey 2015 2:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Deutsch, Aymara, عربي, English
Global Voices Radio sary namboarin'i Kevin Rothrock
Miditra ao amin'ny onjampeo virtoalin'ny Global Voices!
Mientanentana izahay milaza aminareo ny fivoahan'ny Global Voices Internet Radio. Nanangana sy nanangona feo manerana izao tontolo izao ny fikambananay, ary izany dia azonao ao amin'ny solosainao na amin'ny fitaovana finday. Amin'ny fitazonana ny iraka andehananay, dia hasongadin'ny GV Radio ireo feo sy mozika avy amin'izao tontolo izao hita ao amin'ny sehatra fandehanana mivantana an-tserasera 24 ora isan'andro, 7 andro ao anatin'ny herinandro.
Tontosa ity tetikasa vaovao ity noho ny fanohanan'ny Sourcefabric amin'ny alalan'ny sehatra Airtime Pro ao amin-dry zareo.
Fandaharana Global Voices
Hitondra votoaty avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao sy amin'ny fiteny samihafa, mitaratra ny fahasamihafana misy ato amin'ny fiarahamonina misandrahaka manerantany ny GV Radio.
Hanombohan'ny fampielezam-peo, dia hanovo ao amin'ny tahirin-kevitray izahay hanasongadina ireo fandraisam-peo Global Voices nahazo loka tamin'ny lohahevitra isan-karazany. Ho entinay ho anareo ihany koa ny raki-peo avy amin'ny andia-tosa-kevitra GV Face nifanaovanay, sy ireo fanolorana isan-karazany avy amin'ny Zaikabe Global Voices farany teo notontosaina tany Cebu, Philippines.
Nandray anjara tamin'ny fandaharana ôrizinaly notontosainy manokana ihany koa ny mpikambana ato aminay, tahaka ny fandraisam-peo mozika Iraniana natsangan'ny tonian'ny Lingua Farsi Mazyar Mahdavifar sy ny fampisehoana mozika Afrikana antsoina hoe Africa Cheza nataon'i James Propa. Ankoatra izany, misy ireo mozika nandraisan'ny tetikasa Rising Voices antsoina hoe The South of South avy any Mérida, Meksika anjara. Mbola eo ampananganana ihany koa amin'izao fotoana izao ny tetikasa hafa avy amin'izao tontolo izao.
Mpiara-miombon'antoka sy raki-peo nasongadina
Nanorina fiaraha-miasa fandraisam-peo havoaka an-tserasera mampietanentana maro dia maro ihany koa izahay, ka ao anatin'izany ny fandaharana filazan-tantara nomerika Amerikana Latinina Radio Ambulante, izay hivoaka ato amin'ny GV Radio ireo fizaràn-tantara avy ao aminy.
Noho ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fikambanan'ny blaogeran'ny mozika Music Alliance Pact (MAP), dia hampiely ireo tsonga mozika avy amin'ny firenena mihoatra ny 30 nangonin'ny mpikamban'ny MAP Whothehell.net avy any Aostralia amin'ny alalan'ireo Mapcasts mivoaka isam-bolana ihany koa izahay.
Isaky ny roa herinandro izahay no hanasongadina votoaty am-peo avy amin'ny raki-peo vaovaon'ny mpiara-miombon'antoka, izay fantatry ny fikambananay na avy amin'ny soso-kevitry ny mpihaino anay. Amin'ny alalan'ireny fiaraha-miombon'antoka ireny no ikendrenay hitondrana ny asa-pandraisampeony amin'ny mpihaino avy amin'ny sehatra midadasika kokoa ka hahazoan'izy ireo fankatoavana mendrika azy ireo. Raha manana tolo-kevitra amin'ireo fandraisam-peon'ny vondron'olona ifotony tsy mikatsaka tombom-barotra tianao asongadina amin'ny fandaharana manaraka ianao dia mifandraisa aminay, azafady.
Ireo Mpiara-miombon'antoka amin'ny GV Radio hafa:
Ny Mozika an-tSarimihetsika Papuan Voices ( Papua Andrefana)
Ny Papuan Voicedia fandraisana an-tanana fisoloam-bava an-dahatsary iarahana amin'ny mpikatroka Papuan ahafahan-dry zareo milaza ny tantaran-dry zareo amin'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2011-2012 ny EngageMedia and Justice, Peace and Integrity of Creation [Media mitolo-tena sy Rariny, Fandriampahalemana ary ny Fanontolon'ny Zavaboary (sa Famoronana?]niara-niasa tamin'ireo fikambanana ao an-toerana ao Jayapura sy Merauke hampianatra ireo mpikatroka Papuan ny famokarana lahatsary sy ny fahaiza-mampiely ny vokatra. Tamin'ny 2013 sy 2014 izahay niara-niasa tamin'ny Belantara Papua sy ny Yayasan Teratai Hati Papua hanatontosa andian'atrikasan-dahatsary any Wamena sy any Sorong.
Jamaat ul Mausiqi (Pakistan)
Ny Jamaat-ul-Mausiqi dia ny rakipeon'ny mozika pakistaney nandanianao folo taona ny niandrasana azy. Nangadianay ny tany ambanin'ny tany, nianoka tany amin'ny lasa tsy tontan'ny ela, ary niventy ny revolisiona ho avy. Novelomin'i Ahmer Naqvi (@karachikhatmal) sy Shaheryar Popalzai (@spopalzai)
Ny Pinarra Aku dia fandaharana amin'ny radio fitenin'ankizy, mampianatra ny fiteny Warumungu. Natsangan'ny Tale Artistikan'ny BRA, Kathy Burns, izay miara-manatontosa amin'i Rosemary Plummer (Tompony ara-pombandrazana) ny fandaharana. Natao hanabe sy hameloma-maso ny fiteny ny fandaharana. Niara-namoron-kira sy niara-nampianatra i Rosemary sy i Kathy hatramin'ny 2011. Niara-nanambatra ny fitiavany ny fiteny sy ny fanabeazana havelatra ry zareo, ‘Pinarra Aku’
Mbola eo am-pikirakirana ny pejin'ny GV Radio ahafahanareo mahita izay ilaina rehetra hianarana momba ireo feo izay asongadinay izahay izao. Ho hita ao ihany koa ny widget [boaty] ahitanao izay mandeha, izay ho avy manaraka sy ny fiteny andrenesanao azy.
Mbola eo andalam-pivoarana ity tetikasa ity,te-handre avy aminareo izay tianareo sy tsy tianareo izahay, sy izay sosokevitrareo hatao amin'ny fandaharana manaraka.
14 ora izayAzia Atsinanana